Ankehitriny anefa toa fatoran’ny teny nataony ingahy filoha satria tsy mila porofoina aminy intsony ny fahantran’ny vahoaka Malagasy, izay toa hararaotiny sy ataony fitaovana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Raikitra ny fidinana eny ambany tanàna amin’ny fizarazaran-javatra, ka ny herinandro teo no nanaovana bemidina teny La Réunion kely. Nitohy teny amin’ny tionelina Ambohidahy, Ambanidia, Tsiazotafo, Anosy, Antohomadinika, izany ny takarivan’ny sabotsy teo, ka nizarana zavatra, toy ny sakafo ireo fadiranovana sy tsy manan-kialofana antsoin’ny rehetra amin’ny hoe “4mi” izany. Taiza izany hatramin’izay no tsy natao, ary angaha ny Malagasy mahantra indray ? Sa kosa tsy Malagasy ireny olona fadiranovana ezahina alaina ireny ny fony amin’izao fotoana izao? Nambara fa hisy ny fitadiavana vahaolana maharitra, fa taiza no tsy natao izany hatramin’izay? Tsy ilay mizara zavatra sy mampanantena ny olona no ratsy ary zara aza misy an’izany. Ny mampalahelo anefa dia ny hevi-petsy ao ambadika, izay maro no mitsara avy hatrany hoe akaiky ny fifidianana, ka dia ampiakarina kely aloha ny hafainganam-pandehan’ny fanaovana zavatra tahaka izany, raha tsy mba nisy tany aloha. Azo adika hoe fanaovana fitaovana sy fanararaotana tsotr’izao ny fahantran’ny Malagasy. Zavatra efa tokony nataon’ny mpitondra hatramin’izay rahateo izany, ary tsy hilana fizahozahoana hoe manao zavatra satria adidiny izany. Tsy ampahafirin’ny fanesoana vahoaka amin’ny hanim-pitoloha handaniana vola be an-tapitrisany maro be eny Iavoloha amin’ny 05 janoary rahateo ireny fizaran-tsakafo ireny, toa mifono fiatsarambelatsihy ireny, saingy tsy mba menatra ny amin’izany ny mpitondra.